Ny radara sosialy dia miombona amin'ny NetSuite's SuiteCloud | Martech Zone
Ny radara sosialy dia miombona amin'ny NetSuite's SuiteCloud
Radara ara-tsosialy an'ny Infegy dia tafiditra ao amin'ny NetSuite amin'ny vahaolana mitambatra antsoina hoe Social Radar SuiteApp ho an'ny NetSuite's SuiteCloud Computing Platform.
Ny fampidirana dia manitatra ny SuiteAnalytic an'ny lampihazo miaraka amin'ny fanadihadiana mifototra amin'ny andraikitra ho an'ny fironana ara-tantara ny resaka, anjara amin'ny feo, mpanan-kery lehibe, fahitana mifaninana, famakafakana ny fahatsapana, lohahevitra ary sokajy mahaliana sy demografika. Afaka mampiasa an'ity fampahalalana ity ny orinasa amin'izay hananganana vokatra tsara kokoa, fampifanarahana serivisy ary fampielezan-kevitra tsara hanatanterahana ny hetahetan'ny mpihaino kendrena azy ireo, ao anatin'ny sehatra iraisan'ny NetSuite.
Social Radar dia natao hitrandrahana ny sehatry ny fitantanana raharaham-barotra mifototra amin'ny rahona NetSuite hahazoana loharanom-baovao eo noho eo sy haingana momba ny fahitan'ny mpanjifa ary hanatsara ny fahombiazan'ny orinasa toy izao:
Ekipa manao dokambarotra sy marketing dia afaka manara-maso ny tranonkala sosialy hahafantarana izay lazain'ny mpanjifa momba ny vokatra sy ny fifaninanana.
Fantaro avy hatrany ireo lohahevitra mitondra ny marikao.
Ny tahirin-kevitra ara-potoana sy ara-tantara dia azo ampiasaina hanentanana ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing, hiarovana ny tsy fivadihan'ny marika ary ny lazan'ny orinasa.
Ny talen'ny vokatra sy ny mpikaroka eny an-tsena dia afaka mampitombo vondrona mifantoka amin'ny fanadihadiana sy fandinihana miaraka amin'ny fanaraha-maso ny haino aman-jery momba ny famolavolana vokatra vaovao sy ny fandrindrana ny vokatra.
Afaka ampiharina ny fitantanana amin'ny alàlan'ny fahazoana ny sainy sy ny fomba ifandraisany amin'ny angona fampisehoana fivarotana toy ny fidiram-bola, fizarana kitapom-bola, isan'ny fifanakalozana, sy maro hafa.
Ity misy fijerena tsara ny IPO Facebook sy ny habetsahan'ny resaka ary ny fahatsapana manoloana azy:
Topi-maso Radar sosialy
Faly be izahay fa afaka miara-miasa amin'ny NetSuite. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana lalina, eo noho eo Analytics avy amin'ny Radar ara-tsosialy miaraka amin'ny harem-pahalalana sy serivisy misimisy ao anatin'ny sehatra SuiteAnalytics, afaka manome mpampiasa NetSuite fahalalana sy Analytics avy amin'ny loharanom-baovao sosialy marobe. Justin Graves, CEO an'ny Infegy
Visit NetSuite's SuiteApp raha mila fanazavana fanampiny momba ny vahaolana mitambatra.
Tags: famakafakana resakanetsuitefampiharana netsuitefamakafakana ny fahatsapanaradara sosialysuiteapps
Fa maninona no atiny SEO?
Fitomboana amin'ny fivarotana finday